အင်ကြင်းသန့်: November 2011
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 4:31 PM 29 comments:
ဖေဖေအမြဲတမ်း နေကောင်းကျန်းမာစွာ နေနိုင်ပါစေလို့ သမီးအမြဲဆုတောင်းပေးတယ် သိလား။
ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါဖေဖေ။ ဒီနေ့ဆိုရင် ဖေဖေ့အသက်ခြောက်ဆယ့်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီနော်။
တစ်ကယ်တော့ သမီးကလေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖေဖေ့ရဲ့ အသက်ခြောက်ဆယ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကတည်းက ဖဖေ့အနားမှာ နေပြီး ဖေဖေနဲ့အတူတူ အလှူဒါနလေးတစ်ခုခု လုပ်ချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖေဖေရယ် ဆန္ဒက ဆန္ဒသက်သက်ပါပဲ။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ကျတော့ ဆန္ဒတွေကို ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းဆည်းထားလိုက်ရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ဖေဖေ့ရဲ့ အသက်ခြောက်ဆယ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ဒီနိုင်ငံက ဖားအောက်တောရကျောင်းမှာ သမီး နေ့ဆွမ်းအလှူဒါန ဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့လည်း ဖေဖေ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကြာဆံချက်ချက်ပြီး သမီးတို့နားက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သမီးအာရုဏ်ဆွမ်း သွားကပ်ဖြစ်မယ် ဖေဖေ။
ဖေဖေ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထဲက အသက်က အပြင်ကအသက်ထက် တစ်နှစ်ငယ်နေတော့ အခုဆို မှတ်ပုံတင်ထဲမှာ အသက်ခြောက်ဆယ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ ဖေဖေပင်စင်ယူရတော့မယ်နော်။ သမီးဖတ်ဖူးတဲ့စာတွေထဲမှာ ၀န်ထမ်းဘ၀ကနေ ပင်စင်ယူလိုက်တဲ့သူတစ်ချို့မှာ ပင်စင်နာဆိုတဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာတစ်မျိုးကို ခံစားရတတ်လေ့ရှိတယ်တဲ့။ ဖေဖေပင်စင်ယူရတော့မယ်ဆိုတော့ သမီးအနေနဲ့ ပထမဆုံးတွေးပူလိုက်မိတာ ပင်စင်နာအတွက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် သမီးရဲ့ဖေဖေအကြောင်းကို သမီးအသိဆုံးပါ။ အမြဲတန်းလန်းဆန်းတက်ကြွပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ဖေဖေ၊ အရာရာကိုအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့သာ ကြည့်တတ်တဲ့ဖေဖေ့မှာ အလွယ်တကူနဲ့တော့ ပင်စင်နာဆိုတာ မစွဲကပ်လောက်ဘူးဆိုတာ သမီးယုံကြည်တယ်ဖေဖေ။
၂၀၀၉ခုနှစ်တုန်းက သမီးမြန်မာပြည်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်တုန်းကလေ….. လေယာဉ်ပေါ်က အဆင်း လေဆိပ်မှာ လာကြိုတဲ့ ဖေဖေ့ကိုမြင်တော့ သမီးစိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ ဖေဖေက အရွယ်အရမ်းကျသွားသလိုပဲ။ ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ တစ်နှစ်ခွဲလောက်အချိ်န်လေးအတွင်းမှာ ဖေဖေက အိုစာသွားလိုက်တာလို့ထင်မိတယ်။ ပိန်လည်းအရမ်းပိန်သွားတယ်။ သမီးက သမီးရဲ့ဖေဖေကို အမြဲတမ်း လူလတ်ပိုင်း အရွယ်လောက်မှာပဲ ရှိနေစေချင်တာလေ။ (ကဲ…အဲဒါသာကြည့်…. တရားမရှိလိုက်တဲ့ ဖေဖေ့သမီးပါလားနော်....:)။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်တစ်ခေါက် ပြန်တော့ ဖေဖေ့ကိုမြင်ရတာ သမီးစိတ်ချမ်းသာခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖေက ပြန်ဝနေတယ်။ ဗိုက်ကြီးတောင် ရွှဲနေသလိုပဲ။ :D
သမီးလေ ဖေဖေနဲ့အဝေးမှာ ရောက်နေမှ ဖေဖေ့ရဲ့မေတ္တာတွေကို ပိုပြီး သဘောပေါက်ခံစားလာမိတယ်။ ဖေဖေနဲ့အတူနေရစဉ်တုန်းက ဖေဖေ့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကို သမီးက တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ဘူး။ သမီးအပေါ်မှာ အစစအရာရာလိုက်ပြီး ဖေဖေ့ရဲ့ အသေးစိတ်ဂရုစိုက်မှုတွေကို သမီးစိတ်ထဲမှာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မိခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေဟာ သမီးအနေနဲ့ မှားခဲ့မှန်း အခုတော့သိနေပါပြီဖေဖေ။ သမီးကို ကလေးတစ်ယောက်လို အမြဲတမ်း အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ နေတတ်တဲ့ ဖေဖေ့ကို အဝေးရောက်မှ အရမ်းသတိရ တမ်းတမိတယ်။
ကျောင်းကပြန်လာရင် သမီးရဲ့စက်ဘီးထဲက လွယ်အိတ်နဲ့ စာအုပ်တွေကိုထုတ်ယူပြီး ဘာတွေသင်လိုက်လဲဆိုပြီး တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကြည့်တတ်တာ…..။ တစ်ချို့စာတွေကိုဆို ဖေဖေက ဘယ်ဟာက ဘယ်လိုသဘောတရားလေ သမီးရဲ့ စသည်ဖြင့် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြတတ်တာတွေ….
သမီးထမင်းစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့လည်း ဖေဖေက ငါးကြီးဆီ၊ ပရိုဗီမင်၊ စီဗစ် စတဲ့ အားဆေးတွေနဲ့အတူ ရေတစ်ခွက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တိုက်တာတွေ…
သမီးက အဆုတ်သိပ်မကောင်းတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အအေးမမိစေရအောင် သမီးကို ဖေဖေက ပိုးမွေးသလိုမွေးခဲ့တယ်…..ရေချိုးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်း အိကျီင်္လက်ရှည်နဲ့ဘောင်းဘီရှည်ကို တန်းဝတ်ရတယ်။ သမီးရဲ့ ဆံပင်ကိုလည်း ယောကျာ်းလေးပုံစံလို အမြဲတမ်း တိုတိုကပ်ကပ်လေးပဲ လိုက်ညှပ်ပေးထားပြီး ခေါင်းလျှော်ပြီးတာနဲ့လည်း ဖေဖေက တဘက်တစ်ထည်နဲ့ သမီးခေါင်းကို တန်းသုတ်ပေးတတ်တာတွေ....
များသောအားဖြင့် စာဖတ်ရင်း စာကျက်ရင်း သီချင်းနားထောင်ရင်း တန်းလန်းနဲ့ပဲ အိပ်အိပ်ပျော်သွားတတ်တဲ့ သမီးကို ဖေဖေက အိပ်ရာပေါ်သေချာရွှေ့ပေးတတ်တယ်၊ ခြင်ထောင်ချပေး၊ စောင်ခြုံပေး အားလုံးကို ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို လုပ်ပေးသလိုမျိုး သမီးကို ဖေဖေက တောက်လျှောက်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေ…..
အဲဒီလိုတွေနေခဲ့တဲ့ သမီးဘ၀မှာ လူ့လောကထဲကို တကယ်တိုးဝင်တော့မှ ဖေဖေ့ရဲ့အရိပ်ဟာ ဘယ်လောက် လုံခြုံနွေးထွေးသလဲဆိုတာကို သမီးသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့တယ်။ အခုအချိန်မှာ ဖေဖေ့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကို ဘယ်လောက်ပဲတမ်းတပေမယ့် ဘယ်အချိန်ကျမှ ဖေဖေ့ရင်ခွင်ထဲကို သမီးပြန်တိုးဝင်နိုင်မယ်ဆိုတာ သမီး ကိုယ်တိုင်တောင် မသိသေးဘူးဖေဖေ။
ဒီနိုင်ငံမှာ မိုးတွေနေ့တိုင်းလိုလိုရွာပြီး မိုးရွာထဲမှာရုံးကိုသွားရတဲ့နေ့တွေဆိုရင် သမီးဘာတွေကို ပြန်သတိရနေလဲ ဖေဖေသိလားဟင်....။ သမီးငယ်ငယ်တုန်းက မိုးတွေရွာနေပြီဆိုရင် သမီးကို ကျောင်းဖယ်ရီနဲ့ မသွားခိုင်းတော့ပဲ မိုးကာအိင်္ကျီတွေနဲ့သေချာလုံအောင်ဝတ်ပေးပြီး ဖေဖေကိုယ်တိုင် စက်ဘီးနဲ့ကျောင်းကို လိုက်ပို့ပေးတာလေ။ ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါ ဖေဖေက အိတ်ထဲမှာ လုံခြုံအောင် ထည့်ယူလာတဲ့ အိင်္ကျီအခြောက်တစ်စုံနဲ့ သမီးကို လဲပေးတယ်လေ။ ဖေဖေက ရှေ့ကနေ စက်ဘီးနင်း သမီးက ဖေဖေ့ခါးကိုဖက်ပြီး ကျောင်းကိုသွားခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကို သမီး အခုဆို အရမ်းသတိရမိတယ်။ တကယ်တော့ သမီးတို့မောင်နှမသုံးယောက်ထဲမှာ သမီးက ဖေဖေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးနေခဲ့သူလို့ ပြောလို့ရတယ်နော်။ သမီးရဲ့ စိတ်ခံစားမှုအလုံးစုံကို ပြောမပြဘဲ ဖေဖေက သိနေတတ်ခဲ့တယ်။ သမီးရဲ့ မျက်နှာကိုဖေဖေက အမြဲ ဖတ်တတ်နေခဲ့တယ်။
သမီးရဲ့ဘ၀မှာ စိတ်ဓါတ်တွေ အကြီးအကျယ်ကျခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက ဖေဖေ့ရဲ့ အားပေးမှုကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် သမီးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာ သေချာလောက်တယ်။ အခုအချိန်အထိလည်း သမီးဘ၀မှာ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ဓါတ်ကျစရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်း ဖေဖေ့ကို သတိရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သမီးတောင် တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယ လူလွတ်ဘ၀နဲ့ ဒီလိုကိစ္စ တွေနဲ့ ဒီလိုစိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံခဲ့ဖူးရင် မိသားစုတစ်စုလုံးရဲ့ရှေ့မှာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဖေဖေဆိုရင်ရော…လို့ သမီးတွေးမိတယ်။
သမီးမှတ်မိသလောက် ဖေဖေဟာ မေမေနဲ့တကွ သားသမီးတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓါတ်ကျစရာ စကားလုံးမျိုးတွေ၊ စိတ်ညစ်ညူးရမယ့် စကားလုံးမျိုးတွေကို မပြောခဲ့ဖူးဘူး။ ဖေဖေ့မှာ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်ညူးစရာတွေရှိရှိ၊ အခက်အခဲတွေရှိရှိ ဖေဖေက သမီးတို့ရှေ့မှာဆိုရင် အရာအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ နေပြခဲ့တယ်။ ကြွယ်ဝချမ်းသာခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် ဖေဖေက သားသမီးတွေ လိုအပ်သမျှကို တတ်စွမ်းသမျှ ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်ပဲဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပေမယ့် ဖေဖေ့ရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေ ယိမ်းယိုင်မသွားခဲ့ဘူး။ လမ်းမှားနဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်တွေလည်း မရှာခဲ့ဖူးဘူး။
သမီးဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် ဖေဖေအမြဲတမ်းပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ရှိတယ်။ “ငါ့သားသမီးတွေ ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက် ငါ့ကြောင့် ငါ့သားသမီးတွေ လူတောထဲ မတိုးရဲတဲ့အဖြစ်မျိုး၊ ငါ့ကြောင့် ငါ့သားသမီးတွေ သူများနှာခေါင်းရှုံ့ခံရမယ့်အဖြစ်မျိုး၊ သူများအပြောအဆိုခံရ၊ ကဲ့ရဲ့ခံရမယ့်အဖြစ်မျိုး၊ ဘ၀မှာ ငါ့ကြောင့် အမည်းစက်စွန်းထင်းကျန်ရစ်ခဲ့မယ့် အဖြစ်မျိုးတွေကို ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူး” ဆိုတဲ့စကားလေ။ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်း သမီးတို့တွေ လူ့လောကမှာ မျက်နှာညှိုးငယ်ရမယ့် လုပ်ရပ်မျိုးတွေကို ဖေဖေဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖေဖေ့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဖေဖေ။
အစိုးရ၀န်ထမ်းလိုင်းခန်းမှာ နေခဲ့ရတဲ့အတွက် တစ်ခြားအိမ်တွေက တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အဖေတွေက အရက်တွေမူး မိန်းမလုပ်တဲ့သူကို ရိုက်နှက်၊ သားသမီးတွေကို အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းနေတာတွေကို တွေ့ရ ကြားရတဲ့အခါမျိုးတွေ၊ ဖအေလုပ်တဲ့သူက နောက်မိန်းမယူထားတဲ့အတွက် ရင်ထဲမှာထိခိုက်နာကျင် သိမ်ငယ်စွာနဲ့ လူတောထဲမှာ တိုးဖို့ မ၀ံ့မရဲနဲ့ ရှက်ရွံ့နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးတွေကို တွေ့တဲ့အခါ အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ သမီးတို့မိသားစုမှာ မြူတစ်မှုန်စာတောင် မဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ဖေဖေ့ကို ကျေးဇူးတွေ ထပ်ခါထပ်ခါတင်မိတယ်၊ ပိုပိုပြီးတော့လည်း ချစ်လာရတယ်။ သမီးတို့ကို ဖေဖေက ငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝအောင် မထားပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သမီးတို့ မိသားစုလေးက ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပဲ အမြဲပြည့်ဝနေခဲ့တယ်နော်။ သမီးတို့အိမ်လေးမှာဆို အမြဲတမ်းရီသံတွေပဲ ဝေညံနေခဲ့တယ်။
ဒီဘ၀မှာ သမီးအတွက် ဂုဏ်အယူဆုံးက မိသားစုကို သိပ်တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့၊ ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေကို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့သမီးဖြစ်ရတာကိုပဲပေါ့။ ဖေဖေဘယ်လောက်အထိ သမီးတို့ကို ချစ်လည်းဆိုတော့ ဆွေမျိုးတွေကတောင် ဖေဖေ့ကို ပိုကိုပိုလွန်းတယ် ဆိုပြီး ကွယ်ရာမှာ အတင်း ပြောကြရတဲ့အထိပဲနော်။
သမီးတို့အပေါ်မှာ တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ဖေဖေ့ကို သမီးတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ တလှည့်ပြန်ပြီး အစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်။ ဖေဖေက သမီးတို့ကို တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပညာအမွေကို ပေးခဲ့တယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက စာပေကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင်၊ ပညာကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေ့ကို သမီး ဒီအချိန်မှာ အရမ်းကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။
တကယ်တော့ သမီးဖေဖေ့ကို ပြောချင်တာတွေက အများကြီးပါ။ ပြောလို့ ဘယ်တော့မှလည်း ကုန်ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ကတော့ ဖေဖေ့ရဲ့ခြောက်ဆယ့်တစ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့မို့ ဖေဖေ့ကို သတိရတဲ့စိတ်နဲ့ စာလေးတစ်စောင်လှမ်းရေးလိုက်တာပါ ဖေဖေ။ ပြောချင်တာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် သမီးရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ဖေဖေ့ကို အပြောချင်ဆုံး ဖေဖေ့ကို အသိစေချင်ဆုံး စကားလေးတစ်ခွန်းကတော့
ဒီနေ့ဒီရက်မှာကျရောက်တဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ ခြောက်ဆယ့်တစ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင်ဖေဖေချစ်တဲ့ မေမေနဲ့အတူ သားသမီးတွေနဲ့အတူတူ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အတူတူဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါစေ လို့…..။
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 2:00 AM 21 comments: